Maitiro ekudzima makuki kubva kuGoogle Chrome nhanho nhanho | ECommerce nhau
Chokwadi imwe nguva apo iwe waiyedza kugadzirisa dambudziko neInternet yako pakombuta, mumwe munhu anenge akakurudzira iwe bvisa bhurawuza makuki. Kana usiri kujairana nezwi iri, isu tichajekesa kusahadzika kwako, nekuti zvirokwazvo haisiyo nyaya yaunoziva iwe.
Muchikamu chino tinoda kujekesa zvinhu zvishoma kwauri mupfungwa ye chii makuki, nei zvakakosha kuvachenesa kubva paPC yako uye sekutaura kwemusoro wenyaya yacho, tichakuudza sei kudzima makuki Chrome. Ndokunge, kana iwe ukashandisa Google Chrome browser kubhurawuza iyo Internet, isu tinokuudza iwe kuti unogona sei kujekesa makuki.
1 Ngatitangei pakutanga, chii makuki?
2 Kangani uye nei uchifanira kudzima makuki?
3 Saka ndinodzima sei makuki muGoogle Chrome?
3.1 Ngatione ipapo machenese ekushambidza Chrome makuki paPC:
4 Delete Chrome makuki kubva kuApple foni kana piritsi
5 Chii chinoitika kubrowser cache? Ndinofanira kuibvisa futi?
6 Bvisa browser cache
Ngatitangei pakutanga, chii makuki?
Mune mazwi mashoma Cookies zvidimbu zvidiki kana mapaketi e data ayo anotumirwa kune yako webhu browser, mune ino nyaya kuGoogle Chrome, kubva kune mawebhusaiti aunoshanyira. Aya mapakeji madiki ane ruzivo nezve chiitiko chako pane iwo mawebhusaiti iwe aunowana paInternet uye kuti bhurawuza rinochengeta muchimiro chediki diki faira faira.
Zvino, Rudzii rweruzivo rwunochengeterwa makuki? Eya, makuki anogona kuchengeta ruzivo rwakanangana nezita rezita uye password, zvaunofarira saiti kana kunyange izvo iwe zvaungadai wakabvisa pangoro yako yekutengera kana uchishanyira Amazon. Chaizvoizvo yako Google Chrome browser, senge mamwe mabhurawuza aishandiswa kuongorora webhu, chengeta kana chengeta iyi data rese saka haufanire kuvapindazve pese paunoshanyira iwo masosi, izvo zvakanaka hazvo.
Chinhu chinonakidza ndechekuti ivo varipo mhando dzakasiyana dzekuki vanozvibata nenzira dzakasiyana. Semuenzaniso, pane makuki akagadzirirwa kuti abviswe otomatiki pese paunovhara browser rewindo. Kune mamwe marudzi ekuki akagadzirirwa kuchengetwa pane hard drive yekomputa yako kusvikira apera kana kuti waabvisa.
Kana ari sei vachinzi macookie, zvine chekuita ne chirevo "mhanza kuki"(mhanza makuki), mupfungwa yekuti iwo ane ruzivo rwakavanzika.
Kangani uye nei uchifanira kudzima makuki?
Pane zvimwe zviitiko uko zvinokurudzirwa kudzima mafaera aya.
Somuenzaniso, ruzivo rwakachengetwa mucookie cache dzimwe nguva runogona kupokana ine webhusaiti iyo yavanoreva, kunyanya kana iyo webhusaiti ichangobva kuvandudzwa. Izvi zvinogona kukonzera zvikanganiso paunoyedza kuwana iyo peji rewebhu zvakare
ari makuki haana ruzivo rwega rwemushandisi, kunze kwekunge iye iye anga achida kuzivisa webhu kuburikidza neimwe mhando yemibvunzo. Uye kana iine ruzivo rwemunhu, rwakanyorwa.
Saka ndinodzima sei makuki muGoogle Chrome?
Sezvineiwo kubvisa Chrome makuki inzira yakapusa izvo zvinotora zvinopfuura mashoma maminetsi kuti apedze. Izvo zvakakosha kuti utaure, zvisinei, kuti matanho akanyorwa pazasi ndeeGoogle Browser chete, saka kana iwe ukashandisa rakasiyana bhurawuza, matanho anozove akasiyana.
Ngatione ipapo machenese ekushambidza Chrome makuki paPC:
NOTA: Ramba uchifunga kuti riini bvisa makuki kubva kuChannel, chikamu chemawebhusaiti iwe pawakanyoreswa chichavharwa, uyezve, zvaunofarira zvakachengetedzwa zvinogona kubviswa. Izvi zvakakosha nekuti kana ukakanganwa password yako yekuwana, unogona kunge uine matambudziko ekupinda mumasaiti ako aunofarira.
Pakombuta yako, vhura Google Chrome browser.
Zvino tinya pane icon nemitsetse mitatu yakatwasuka iri mukona yekumusoro yekurudyi peji.
Mune mamiriro ezvinhu menyu tinya pane sarudzo "Zvirongwa"
Pane peji rinowoneka, pfuurira pasi uye tinya chinongedzo "Ratidza marongero epamberi".
Muchikamu cheKwakavanzika, pinda chikamu che "Zvirongwa zvemukati".
Muchikamu che "Cookies", tinya pane "All makuki uye rese saiti data ..." chikamu.
Pazasi iwe uchaona ese makuki kubva kune mawebhusaiti awakashanyira uye ayo akachengetwa pakombuta yako.
Iwe une sarudzo yekusarudzika yega yega kuki kana kungobaya "Bvisa zvese" kuti ubvise makuki ese kubva kuC Chrome zvachose.
Zvino ko kana izvo zvaunoda zviri kudzivirira makuki kubva kuchengetwa pakombuta yako, zvaunofanirwa kuita zvinotevera:
Zvakare pinda chikamu che "Zvirongwa" nekudzvanya pane icon iri mukona yekumusoro yekurudyi peji.
Wobva wadzvanya pane iyi link "Ratidza marongero epamberi" uyezve muchikamu cheKwakavanzika, tinya pane "Zvirongwa zvemukati" chikamu.
Chekupedzisira, muchikamu cheKuki, gonesa sarudzo "Bvisa gadziriso yedhata pane saiti" wobva wadzvanya "Done" kuchengetedza shanduko.
Delete Chrome makuki kubva kuApple foni kana piritsi
Kana iwe uchida bvisa makuki muGoogle Chrome kubva kunharembozha yako kana yako Android piritsiIwe unogona zvakare kuzviita uye maitiro acho zvakaenzana zvakapusa.
Vhura iyo Chrome chishandiso pane yako Android chishandiso wobva wadzvanya pane icon ine matatu akamira madonhwe ayo ari kumusoro kwepamusoro chikamu chechidzitiro.
Pazasi pemenu yemamiriro, tinya pane "Zvirongwa" sarudzo.
Wobva wadzvanya pane "Chakavanzika" chikamu uyezve, pazasi, tinya pane sarudzo "Bvisa kubhurawuza data".
Pachiratidziro chinotevera unogona kusarudza renji yenguva inogona kuve "Yekupedzisira awa", "Kwekupedzisira maawa makumi maviri nemana", "Mazuva manomwe apfuura", "Mavhiki mana apfuura" uye "Kubva nguva dzose".
Kuti upedze, tinya pane "Delete data rese".
Zvigadziriso zvemberi zviripo zvinobvumidza iwe kusarudza zvinhu zvekudzima, zvinosanganisira zvakachengetedzwa mapassword, fomu auto-zadza dhata, marongero ewebsite, pakati pevamwe.
Chii chinoitika kubrowser cache? Ndinofanira kuibvisa futi?
Zvino ngatitaurei zvishoma nezve browser cache uye nei ichikosha bvisa nguva dzose. Kana tichitaura nezve cache yebrowser, isu tiri kungotaura nezvenzvimbo pane hard drive yekomputa yako, uko webhu browser inochengeta zvese data raunotora kubva pamapeji ewebhu, kana mushandisi akashanyira iyo saiti zvakare, inokurumidza kurodha peji.
Kekutanga iwe paunowana peji rewebhu paInternet, bhurawuza rinotarisira - tora zvimwe zvinhu zvewebsite yakati, senge marogo, mifananidzo, nezvimwe, uye zvinoriisa.
Izvo zvinobva zvaratidza zvinhu izvi pane peji rauri kutarisa, zvinoreva kuti pane peji rekuwedzera iwe waunoshanyira, hapana chikonzero chekudzoreredza izvo zvinhu kubva pawebhu peji. Zvinhu izvi zvinogara zvichiratidzwa munzvimbo imwechete sezvo zvakachengetwa pane rakaoma dhiraivhu.
Zvino izvi cache ine saizi muganho, iyo inogona kazhinji kugadziridzwa. Kana bhurawuza cache yazara, zvinhu zvisina kushandiswa munguva pfupi zvinoraswa kuti zviite nzvimbo yakawanda. Naizvozvo, tinogona kutaura kuti cache cache ingori nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvewebhu peji, nenzira yekuti hapana chikonzero chekuzvirodha nguva dzese paunoshanyira peji rewebhu.
Bvisa browser cache
Bvisa browser cache zvinongoreva kuzviburitsa, saka nguva inotevera paunoenda kune peji rewebhu, zvinhu zvese zvinoda kutorwa zvakare.
Dzimwe nguva chimwe chinhu chinoitika kuti mapeji ewebhu haana kuratidzwa nemazvo, zvichikonzera kuti mifananidzo isina kukwana ionekwe kana munzvimbo dzisina kunaka.
Ndipo pandinoziva Zvinoda kujekesa bhurawuza cache kugadzirisa rudzi urwu rwechinetso. Kudzima cache mu Chrome matanho aunofanirwa kuteedzera anoratidzwa pazasi:
Pinda mubhurawuza rako Zvirongwa kubva kune matatu-mitsara icon iri kumusoro-kurudyi kona yeiyo peji.
Zvino muchikamu cheKwakavanzika, tinya pane "Bvisa data rekuvhura" chikamu.
Chekupedzisira, mubhokisi rinowoneka, unofanira kungoona kuti sarudzo "Mifananidzo uye cache zvakachengetwa munharaunda" zvasarudzwa.
Kuti ubvise cache yese sarudza iyo nguva renji "Iyo yekutanga" wobva wadzvanya pa "Deleting browsing data".
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » Maitiro ekudzima makuki kubva kuGoogle Chrome
Chii chinonzi Amazon Premium?